XY GROUP OF COMPANIES – YANGON, MYANMAR. +959500 6510, tinaunglay@xy-trading.com
Minhla Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co., Ltd, one of XY Group of Companies, export Myanma Emata Rice, Parboiled Rice and Broken Rice to West Africa, Europe (Belgium, France, Germany, Greece, the Netherlands, Poland, and UK), Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, and Singapore.
US Global Petroleum ကုမ်ပဏီ က EVEREST Lubricants ကို အမရေိကနျ တှငျ ထုတျလုပျ ပွီး၊ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ XY Trading Company က တငျသှငျး ဖွနျ့ခြိသညျ။ အမြိုးအစား တဈခုခငျြးစီ၏ အသေးစိတျ အခကျြအလကျမြား ကို ပုံ တဈပုံ ခငျြးစီ ထောကျ၍ ကွညျ့ရှုပါ။
US Global Petroleum ကုမ္ပဏီ က EVEREST Lubricants ကို အမေရိကန် တွင် ထုတ်လုပ် ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် XY Trading Company က တင်သွင်း ဖြန့်ချိသည်။ အမျိုးအစား တစ်ခုချင်းစီ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ကို ပုံ တစ်ပုံ ချင်းစီ ထောက်၍ ကြည့်ရှုပါ။
DIESEL/ GASOLINE/ CNG
API-CK4HEAVY DUTY DIESEL
X Y Trading ကုမ်ပဏီ မှ အောကျဖျေါပွပါ ဓါတျမွသွေဇာ မြား ကို မှာယူတငျသှငျး ဖွနျ့ခြိပါသညျ။
ဗီယကျနမျ နိုငျငံမှ ထုတျလုပျသော NPK ကှနျပေါငျး ဓါတျမွသွေဇာ (Grow Up NPK 15 15 15 +7S) (see more >>>>> )
ယူရီးယား ဓါတျမွသွေဇာ (Urea Fertilizer) (see more >>>>>)
ဆီလီကာ ဓါတျမွသွေဇာ (Silica Fertilizer) (see more >>>>>)
X Y Trading ကုမ္ပဏီ မှ အောက်ဖေါ်ပြပါ ဓါတ်မြေသြဇာ များ ကို မှာယူတင်သွင်း ဖြန့်ချိပါသည်။
ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော NPK ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (Grow Up NPK 15 15 15 +7S) (see more >>>>> )
ယူရီးယား ဓါတ်မြေသြဇာ (Urea Fertilizer) (see more >>>>>)
ဆီလီကာ ဓါတ်မြေသြဇာ (Silica Fertilizer) (see more >>>>>)
Stop Moisture Damage in intercontinental transport to improve your productivity and save your brand. Moisture damage during container transport isacostly and unpredictable challenge. XY Trading Company Limited imports and distributes AbsorGel in Myanmar.
လူကွီးမငျးရဲ့ Export ကုနျပစ်စညျးတှေ ရငှေေ့ (moisture) ကွောငျ့ ပကျြစီးဆုံးရှုံးတာ ကွုံနရေပါသလား❓
👉 ရငှေေ့ ကွောငျ့ ပကျြစီးဆုံးရှုံးရတာကို ကာကှယျဖို့ အတှကျ Absortech က ၁၉၉၆ ကစပွီး စှနျ့ဦး တညျထှငျသူ ဖွဈလာပါတယျ။
👉 ရငှေကွေ့ောငျ့ ပကျြစီး ဆုံးရှုံးရတာကို ကာကှယျပေးမယျ့ အကြိုးသကျရောကျမှု အပွညျ့ရှိပွိး အလှယျတကူ အသုံးပွုလိုရတဲ့ ရငှေစေု့ပျ ပစ်စညျးမြားကို Absortech က ထုတျလုပျ ဖွနျ့ဖွူးခဲ့ပါတယျ။
👌 သုတသေန နဲ့ ကုနျပစ်စညျး အရညျအသှေး တိုးတကျရေး (Research and Development) ဌာနရဲ့ စဉျဆကျမပွတျ ကွိုးပမျးမှုနဲ့ ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ အရညျအသှေးမွငျ့မားတဲ့ ရငှေေ့ စုပျ ပစ်စညျးမြားက သငျ့ရဲ့ ကုနျပစ်စညျးမြားကို ကှနျတိနျနာ အတှငျး ရငှေကွေ့ောငျ့ မပကျြစီးအောငျ အကောငျးဆုံး ကာကှယျ ပေးပါတယျ။ (see more >>>>>)
လူကြီးမင်းရဲ့ Export ကုန်ပစ္စည်းတွေ ရေငွေ့ (moisture) ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာ ကြုံနေရပါသလား❓
👉 ရေငွေ့ ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် Absortech က ၁၉၉၆ ကစပြီး စွန့်ဦး တည်ထွင်သူ ဖြစ်လာပါတယ်။
👉 ရေငွေ့ကြောင့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးရတာကို ကာကွယ်ပေးမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှု အပြည့်ရှိပြိး အလွယ်တကူ အသုံးပြုလိုရတဲ့ ရေငွေ့စုပ် ပစ္စည်းများကို Absortech က ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပါတယ်။
👌 သုတေသန နဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး တိုးတက်ရေး (Research and Development) ဌာနရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ရေငွေ့ စုပ် ပစ္စည်းများက သင့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကို ကွန်တိန်နာ အတွင်း ရေငွေ့ကြောင့် မပျက်စီးအောင် အကောင်းဆုံး ကာကွယ် ပေးပါတယ်။ (see more >>>>>)